မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: Bloggers R Human 2!
အင်း ...လို့သံရှည်ဆွဲရင်း ထောက်ခံသွားတယ်။ စကားမစပ် အခွန်ဆောင်ပြီးပြီလား သက်တန်းတိုးပြီးပြီလား။ စာရွက်ပေးဖို့ သတိရသွားတယ်။ ရသွားပြီလား
အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး.... ပေါ့လေ... (ကိုဒီဘီ စတိုင်လ်)ဒါတွေက ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်(ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါ)ခွေးတော့ မလွှတ်ပါစေနဲ့ဗျာ။ ကိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ပဲအာရုံနောက်ရမှာ.. :D
ဟုတ်တယ်အစ်မ.. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ။ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
you talking too much.I cant read all. if you want let me know ring me. dont waste your time for rubbish. just concentrate on your issue only. got it?